Mustaqbalka Muwaadiniinta Yurub marka Britain ay ka baxdo midowga - BBC News Somali
Mustaqbalka Muwaadiniinta Yurub marka Britain ay ka baxdo midowga
27 Juunyo 2017
Michel Barnier ayaa sheegay in ujeeddadiisa ku aaddan xuquuqda muwaadiniinta ay ahayd in lagu guuleysto dhowrid la mid ah tan sharciga Midowga Yurub uu dhigayo.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay inay dooneyso in saddex milyan oo ah muwaadiniin ka soo jeeda waddamada Midowga Yurub ee ku nool Britain ay joogaan, ka dib ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub.
Mrs May ayaa sheegtay inay yeelan doonaan xuquuqo la mid ah kuwa ay muwaadiniinta Britain u leeyihiin caafimaadka, waxbarashada, faa`iidooyinka iyo lacagaha dadka howlgabka noqda la siiyo.
Dowladda ayaa sameyn doonta wax walba oo ay awooddo si ay u fududeyso hannaanka u damaanad qaadaya xaqa ay u leeyihiin inay sii joogaan muwaadiniinta Midowga Yurub ee Britain ku noolaa muddo shan sano ah.
Madaxa midowga Yurub u qaabilsan wadaxaajoodka ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub, Michel Barnier, ayaa sheegay in ujeeddadiisa ku aaddan xuquuqda muwaadiniinta ay ahayd in lagu guuleysto dhowrid la mid ah tan sharciga Midowga Yurub uu dhigayo.
Maxay yihiin qodobada ay ku heshiiyeen Imaaraadka iyo Israa'iil?
Faahfaahin ka soo baxaysa weeraro xalay Muqdisho ka dhacay
Trump oo ka cabanaya biyaha yar in aysan timihiisa dhaqi karin